Iindaba-Indlela yokuThutha yokuGcinwa koLwazi iNcedisa njani iChain eqhubekayo ye-Medicine Cold Chain?
I-Information Storage Shuttle System iNcedisa njani iChain eqhubekayo ye-Medicine Cold Chain?
1. ngobaingaba amayeza afakwe efrijini afuna indawo yokugcina engqongqo?
Ukugcinwa kunye nokuthuthwa kwezitofu zokugonya, ukuba ubushushu bokugcina bungafanelekanga, ixesha lokuqinisekiswa kweyeza liya kufinyezwa, lincitshiswe i-titer okanye lihlehliswe, ukusebenza kuya kuchaphazeleka kwaye kunye nemiphumo emibi iya kwenzeka.Iimeko ezimandundu, njengokulunywa yinja enesifo somgada, ufumana isitofu sokugonya umgada esingasebenziyo ngaphandle kokwazi, kwaye iziphumo ziyabonakala.
2. Yintoni iyeza elibandayo?
"I-Medicine cold chain" yinkqubo yokubonelela yonke into ethetha ukuba amachiza afuna ukuba afakwe efrijini kufuneka abe kwindawo yokushisa ephantsi echazwe lichiza ngalinye ukusuka kwimveliso, ukugcinwa, ukuthutha, ukuhanjiswa, ukuthengisa, ukuya kumayeza esigulane kunye namanye amakhonkco, ukuqinisekisa umgangatho kunye nokhuseleko lwamachiza afakwe efrijini kunye nokunciphisa ilahleko, ukuthintela ungcoliseko.
Indawo ekhuselekileyo yokugcina amayeza amaninzi iphakathi kwe 2°C kunye ne 8°C.
3. Njani ukuqinisekisa ukhuseleko amayeza chain ebandayo?
Ugcino olubandayo:Ngokweemfuno ze-GSP, ukuxhobisa ukujonga okuzenzekelayo, ukubonisa, ukurekhoda, ummiselo kunye ne-alarm, kunye nokusebenzisa inkqubo yonikezelo lwamandla amabini.
Ugqithiselo lwangaphandle kwendawo yokugcina impahla:Ukusuka kwindawo yokugcina impahla ukuya kwi-pharmacy kunye newadi, amayeza afakwe efrijini kufuneka ahanjiswe kwi-incubator yokugcina ebandayo, kwaye ixesha lokungena kunye nokuphuma lirekhodwa, kwaye ugweme amayeza ashiya izixhobo zefriji ixesha elide.
Indawo yokugcina ikhemesti:Ikhemesti ixhotyiswe ngenkqubo yokujonga ubushushu obuzenzekelayo kunye nokufuma, enokubonelela ngesilumkiso sangethuba sobushushu obungaqhelekanga kunye nezixhobo zokusilela kwezixhobo zefriji.
I-Inform Storage ithathe inxaxheba ekwakhiweni kweendawo ezininzi zokugcina izinto kwishishini lamachiza iminyaka emininzi, kwaye iqonda ngokupheleleyo iimfuno zokugcina kwishishini lamachiza.Ngokujoliswe kwiimpawu zekhonkco elibandayo lamayeza, isisombululo esifanelekileyo sokugcinwa kwamayeza kwindawo ebandayo siqalisiwe.
Medicine Cold Chain Solution forInkqubo yokuhambisa iShuttle
Medicine Cold Chain Solution forIiShuttle ezininziInkqubo yokukhetha
Yazisa i-Warehouse Management Software (WMS) ibeka iliso ngokuzenzekelayo, ibonise, irekhode, ilawule, kunye ne-alamu kumachiza akwisitokhwe ukuqinisekisa uluhlu lwamayeza olukhuselekileyo kwikhonkco elibandayo.
ICarton Live, IShuttle yomntwana, Umhambisi, I-Four Way Shuttle, Qhuba kwi Racking, Asrs Ugcino,